PressReader - Kwayedza: 2019-01-04 - Tishamwaridzane
Kwayedza - 2019-01-04 - Tishamwaridzane -
VETISHAMWARIDZANE kwaziwai. Ndiri murume anofarira Africa uye 37 ndiwo makore angu. Pasi rose muAfrica chete ndimo munowanikwa vakadzi vane tsika nemagariro zvakarurama chose, vakaumbwa nehunyanzvi hwemandorokwati hunonwisa mvura, vane chido nekuchengetedza hutano hwavo.
Ini chishuvo changu kushamwaridzana nemudzimai akadai sezvandatsanangura pamusoro. Kana pane andidawo nhare yangu ndiyo 0712 774 011. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39, ndinoda mukadzi ane makore 25 - 35 anoda kuvaka ari pachokwadi. Nhare yangu 0772 512 752. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvakawo mukadzi anodawo zvekuvaka musha ane mwana mumwe.
Anondida anondibata pa0775 520 299. *****
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 45 ndotsvaga murume ane makore 45 kusvika 55. Nhare yangu 0783 394 277. *****
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore makumi mana ndinodawo murume wekufambidzana naye.
Varume vevanhu kwete, ndinoda ane chero makore. Vanoda ndibatei pa0717 723 860. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45. Ndoda mukadzi wekuroora ane makore 44 kusvika 35, ari nherera seni. Nhare dzangu 0716 151 166. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane vana 2, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 30 kusvika 40.
Ndine makore 23, nhare yangu 0719 614 782. *****
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndakambonyorera asi hapana chakaitika. Ndine makore 24 uye ndinotsvaga musikana wekufambidzana naye kusvika muwanano. Anoda anondibata pa0713 833 865. *****
Ndiri murume ane makore 42, ndoda mukadzi ari pamushonga.
Ngaave nemakore 23 kusvika 28. Nhare yangu 0782 464 169. *****
Makadini paTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 44, ndinodawo mukadzi wekuwana ari pachokwadi. Ngaave ane makore 30 kusvika 33. Ndoshanda ari kuda zvemba ngaandibate pa0773 866 454. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 ndotsvagawo musikana ane makore 23 kusvika 25. Nhamba dzangu 0774 104 678. *****
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo mudzimai asiri pamushonga. Nhare yangu 0773 108 201. *****
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvagawo musikana anoda zvekuvaka musha neni asiri pamushonga anotya Mwari. Ngaave mutsvuku ane runako pachiso, akanaka moyo wake uye ane makore 18 – 22. Ini ndiri MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: [email protected] kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.
pachokwadi pa0775 579 061. kana pane andifarira ndinobatika
ndiri Makadii? pamushonga. Ini ndiri murume Ndinotsvagawo ane makore mukadzi, 39 uye andida ngaandibate pa0772 ***** 901 031. Makadii? mukadzi Ndiri ane murume vana 1 ane - 2. Ndoshanda makore 39 ndodawo uye handisi pamushonga. Nhare yangu 0772 109 187. *****
Ndiri murume ane makore 35 nevana 2, ndogara muHarare uye ndiri HIV positive. Ndoda mukadzi ane makore 24 - 32 ane mwana wake. Ari pachokwadi ngaandibate pa0775 126 879. *****
Ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvakawo musikana wekuwadzana naye ane makore 18 kusvika 20 asina mwana nekuti inini handina. Ari muHarare anoda ngaandibate pa0784 464 701. *****
Ndodawo musikana asina kumboroorwa ane makore 25 zvichidzika, anoda zvepamusha. Ngaave ari mutete asina chirwere, ndinobatika pa0784 116 965. *****
Makadii? Ndiri musikana ane makore 24, ndotsvagawo murume ane makore 27 kusvika 36 asina chirwere.
Ndinobatika pa0784 334 206. *****
Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi ari serious nokuda imba ane makore 30 zvichidzika anonamata ane vana 2 kana asina. Ini ndine 2, asiri pamushonga andifarira ngaandibate pa0771 738 166. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32. HIV positive uye ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 20 - 26 ari pachokwadi wekuManicaland.
Ndibatei pa0771 243 402. *****
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvagawo shamwari yechikomana. Ndine makore 26, andida ngaandibate pa0773 327 989. *****
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera ndichitsvaga mudzimai wekugara naye, handisati ndamuwana. Ini ndiri murume ane makore 35 uye ndiri HIV negative. Ndodawo mukadzi ari negative ane makore 20 – 29 asingandipedzeri nguva uye ari munaku. Nhamba dzangu 0713 602 316, ndatenda. *****
Ndiri murume ane makore 34, handisi pamushonga uye mudzimai andida ngaandibate pa0773 338 645. Ndoda ari pachokwadi. *****
VeTishamwaridzane makadii? Ndiri mukadzi ane makore 43 ndotsvaga murume ane makore 48 kusvika 60. Ndoita basa remawoko uye ndiri HIV negative. Andifarira ndobatika pa0777 385 595. *****
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 34 ndinotsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi ane makore 40 kusvika 45. Ndobatika pa0771 588 688 asi matsotsi kwete. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45 ndinotsvaga mukadzi ane makore 35 kusvika 40 ane mwana kana asina. Zvakawanda totaura, andida anondibata pa0771 710 818 ari serious kwete matsotsi nekuti ndanzwa nevanoda mari. *****
Ndiri murume ane makore 47 okuberekwa ndotsvaga mukadzi wekuroora ane makore ari pasi peangu uye asiri pamushonga seni . Vana ndine 3. Andifarira ngaandibate pa0715 379 029. *****
Ndinotsvagawo murume ane makore 25 kusvika 30 ane vana 2.
Ini ndine makore 22 nevana vaviri, andida ngaandibate pa0783 440 144. *****
Ndiri murume ane mwana 1, ndogara muHarare uye ndine makore 32. Ndodawo mukadzi wokuroora asiri pamushonga. Andida ndibate pa0782 421 763. *****
Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana 1,
HIV+ zvemba uye ane ndinotsvagawo rudo rwechokwadi. murume ari kuda Ngaave ane makore 38 kusvika 45, nhare yangu 0776 208 363. *****
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 48, ndinotsvagawo murume ane makore 50 – 60. Ndiri pamushonga, andida ngaandibate pa0771 700 611. *****
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana ane makore 22 zvichidzika akanaka. Ndinoita self- job uye ndinogara muHarare kuEpworth. Andifarira anondibata pa0776 330 995. *****
Ndiri murume, ndinodawo mudzimai ane makore 25 - 27 wekupinda naye murudo akanaka uye ane mwana 1. Ndinoda anoshanda, zvakawanda tozotaura pa0715 106 005. *****
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 20 ndinodawo murume ane makore 25 kusika 32 anoda zveimba uye ane rudo. Ndine mwana 1, asiri pamushonga ngaandibate pa0784 586 352 asi varume vevanhu kwete. *****
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 37 ndotsvagawo murume ane makore 39 – 40. Ndine vana vaviri, ndogara muHarare. Andifarira nhare yangu 0712 513 081. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28 nemwana, ndotsvagawo mukadzi ane mwanawo wake kana asina. Andifarira anondibata pa0772 758 315. *****
Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvaga mukadzi wekushamwaridzana naye. Anoda anondibata pa0714 374 125. *****
Makadini henyu vedare? Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 19 – 26. Ari serious ngaandibate pa0713 215 029. *****
Makadii zvenyu? Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo wekuroorana naye musikana ane makore 20 – 28. Anenge andifarirawo ngaandibate pa0782 336 486. *****
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana wangu 1. Ndinotsvagawo murume ane makore 40 zvichidzika ari HIV positive, nhare yangu 0774 156 190. *****
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 20 ekuberekwa ndinotsvakawo murume ane makore 30 - 23.
Andidawo ngaandibate panhamba idzi 0775 231 921, asiri pamushonga. *****
Ndinotsvagawo mukadzi ari pamushonga makore angu i32 ngaave pa20 kusvika 28. Nhamba dzangu 0775 474 091. *****
Makadii henyu? Ndinonzi Tatenda, ndinoda mukadzi wekuroora.
Ndine makore 23 uye ndiri kuda anonamata ndinongara kuBindura.
Ndiri kuda ari pakati nepakati pakusimba. Fonai pa0777 155 160. *****